RelateIQ: Ubudlelwane bobuhlakani kwi-CRM | Martech Zone
RelateIQ: Ubudlelwane bobuhlakani kwi-CRM
NgoLwesithathu, Agasti 19, 2015 NgoLwesithathu, Oktobha 28, 2020 Douglas Karr
I-RelateIQ yiCRM elula edibanisa nebhokisi yakho ye-imeyile ukwetyisa ngokuzenzekelayo kwaye uququzelele idatha kumthombo ngamnye wedatha. I-RelateIQ ivumelanisa ngokuzenzekelayo idatha kwi-imeyile yakho engenayo nephumayo, ikhalenda, kunye neefowuni ze-smartphone (nangona usetyenziso lweselfowuni) ukuphelisa ukungena kwedatha ngesandla kwiCRM. Ihambele phambili kangangokuba ukuba umntu othile u-imeyile kuwe kwaye awuphenduli, baya kuyenzela isikhumbuzi ngokuzenzekelayo.
I-RelateIQ ishenxisa ukufakwa kwedatha ngesandla ngokufaka ii-imeyile ngokuzenzekelayo, iintlanganiso, kunye neefowuni ezinxulumene nezivumelwano zakho. Iimpawu ezikrelekrele, ezinje nge Ulandelo olulandelayo kwaye Iindawo zoBukrelekrele, Thatha lo msebenzi wonxibelelwano kwaye uwusebenzisele ukwenza iqela lakho libe nemveliso ngakumbi.
Iqonga likwanemodyuli yokunika ingxelo yokuthengisa ukubonelela ngomsebenzi, ukukhula kwentengiso, isantya sokuthengisa kunye nengxelo yemibhobho.
I-RelateIQ idibanisa neMailChimp, iPardot, iHubSpot kunye neZapier kwaye ine-Chrome Extension ebanzi.
tags: CRMubukrelekrele be-crmulawulo oludibene nabathengiI-RelateIQumsebenzi wentengisoUhlalutyo lokuthengisaUmbhobho wokuthengisaingxelo yokuthengisaisantya sentengiso
Izinto ezi-4 ekufuneka ubenazo kuMxholo ngamnye